Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : June 2014
The Golden Age of Writers' Theatre - Junior Win
The Golden Age of Writers’ Theatre
Junior Win ၏ Walking Through The Wonderand ကင်ဒဲယ် အီးဘုတ်မှ The Golden Age of Writers’ Theatre ကုိုကိုယ်တုိုင်ဘာသာပြန်ထားပါသည်။
(၁၉၅၀? လောက်က ကပြခဲ့ကြသော ဒုိုင်းခင်ခင်ပြဇာတ်အတွက် အစမ်း ရီဟာဇယ် လေ့ကျင့်နေကြစဉ်။ (၀ဲမှယာ) (ဦး) သုခ၊ ဦးခင်မောင်လတ်၊ (ဒေါ်) ခင်မျိူးချစ်နှင့် (ဒေါ်) မလှသန်း။)
“စာရေးဆရာပြဇာတ်“ မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာပြည်က စာရေးဆရာတွေ တီထွင်လုိုက်တာ ဖြစ်ပါသည်။ သူတုို့က ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးတွေတော့ မဟုတ်ကြပါဘူး။ သုို့သော် သူတုို့က တကယ့်သရုပ်ဆောင်တွေလုိုပဲ သရုပ်ဆောင်ကပြ ကြပါသည်။ စာရေးဆရာ များ၏ပြဇာတ် ပေါ်လာတာ မြန်မာပြည်မှာ ဂျပန်တွေခေတ် ကနေစလာလုိုက်တာ ၁၉၅—? အထိကဟုပဲ ခန့်မှန်းပါသည်။ ကျွန်မတုို့၏ အဘုိုးအဘွားများက စာရေးဆရာများဆုိုတော့ အဲသည်ပြဇာတ်ထဲ ပါဝင်ကြတာ အသေအချာပေါ့။
● စာရေးဆရာပြဇာတ် ဘယ်လုိုစဖြစ်ပေါ်?
အဲသည်အချိန်အခါတုန်းက မြန်မာစာရေးဆရာများ အဖွဲ့ကနေ ရန်ပုံငွေ အတွက် ပြဇာတ်တစ်ပုဒ်ကဖုို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ အဖွဲ့ဝင် တွေဟာ ဦးပုည၏နံမယ်ကြီး ပြဇာတ်များအပါအ၀င် မြန်မာပြဇာတ်များစွာကုို ရွေးချယ် ကပြကြဖို့ စဉ်းစားခဲ့ကြပါသည်။ (ဦးပုညဆုိုတာ မြန်မာ့နံမယ်ကျော် စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာကြီးဖြစ်သည်။ ကဗျာတွေလည်းများစွာ ရေးသားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သူကသမုိုင်းဝင် နံမယ်ကျော် စာကြီးပေသားများကုို ရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ သူရေးသားသော ကဗျာစာကြောင်းများမှာ ရှည်လျားပြီးခက်ခဲလှ၏။ ဘယ်လုိုရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေ မှပင် သူ့စာကြောင်းကြီးများကုို သံနေသံထား မှန်မှန်ဖြင့် အလွတ်မရွတ်နုိုင်ကြပါ။ အင်း….. စာရေးဆရာများကလွဲ လုို့ပေါ့။ သည်ထဲမှာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်လဲ ဟုတ်နေသည့် စာရေးဆရာကြီး ဦးသုခ လုို နံမယ်ကျော် စာရေးဆရာ အဆုိုတော်ကြီး အတွက် ချွင်းချက်ထားရပေတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။)
● စာရေးဆရာပြဇာတ်အတွက် ပြဇာတ်များ
စာရေးဆရာပြဇာတ်ထဲတွင် စာရေးဆရာများက မင်းသား မင်းသမီးများ ဖြစ်လာသည်။ သူတုို့ကပြခဲ့သည့် ပြဇာတ်များမှာ ဒုိုင်းခင်ခင် (သီပေါမင်း၏ ကြင်ယာတော် အကြောင်းရေးထားသည့် ဇာတ်လမ်း) ပြဇာတ်၊ ၀ိဇယ (မင်းသားအမည်)၊ နတ်သျှင်နောင် (မြန်မာစစ် သည်နှင့်ကဗျာဆရာ အကြောင်းဇာတ်လမ်း) ပြဇာတ်၊ မြ၀တီမင်းကြီးဦးစ (မြန်မာစစ်သည်တော် ပညာတတ် ကဗျာဆရာ အကြောင်း) ပြဇာတ်၊ စသည်စသည်ဖြင့်တုို့သည် စာရေးဆရာ ပြဇာတ်များဖြစ်လာကြပါသည်။
(ပုံတွင် စာရေးဆရာကြီး (ဦး) သင်္ခက ဘုရင်အဖြစ်၊ (ဒေါ်)ခင်မျိူးချစ်က ဘုရင်မကြီးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်နေကြပုံ။)
● ဘယ်သူတွေက ဘယ်လုိုဇာတ်ကောင်တွေ သရုပ်ဆောင်ကြသလဲ?
(ဦး)သင်္ခ (စာရေးဆရာ) က အမြဲတမ်း ဘုရင်လုပ်ကာ ကျွန်မအဘွား (ဒေါ်)ခင်မျိူးချစ်က အမြဲတမ်း ဘုရင်မကြီး လုပ်လေ့ရှိကြပါသည်။ ရွှေညာမောင် (စာရေးဆရာ) က အဓိကသရုပ်ဆောင် လုပ်လေ့ ရှိပါသည်။ မေနွဲ့(သူက စာရေးဆရာမ အရင်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်မှ စာရေးဆရာပြဇာတ်ကနေ မင်းသမီးတကယ် ဖြစ်သွားတာပါ။) က အဓိကမင်းသမီး လုပ်ပါသည်။ ဗိုလ်ဗကုို (စာရေးဆရာ) ကဒုိုင်းခင်ခင် ပြဇာတ်တွင် သီပေါမင်းသား လုပ်ပါသည်။ (ဒေါ်) မလှသန်း (စာရေးဆရာ) က ဒိုင်းခင်ခင် လုပ်ပါသည်။ ဦးချင်းစိန် (စာရေးဆရာ) က နတ်ရှင်နောင် လဲလုပ်ကာ မြ၀တီမင်းကြီးဦးစ လဲလုပ်ပါသည်။ (ဦး) သုခ (စာရေးဆရာ) က ၀ိဇယမင်းသား အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မောင် ဖေငယ်အဖြစ်လည်းကောင်း သရုပ်ဆောင်ပါသည်။ သူသရုပ်ဆောင်တဲ့ ၀ိဇယ ဇာတ်ကောင်သည် ဦးသုခအား ဒရာမာ ဇာတ်ကောင်အဖြစ် တွန်းပုို့ခဲ့ပါတော့သည်။ ဂျပန်ခေတ်တစ်ခေတ်လုံးမှာ (ဦး)သုခသည် သီချင်းပြဇာတ်များစွာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဇ၀န (စာရေးဆရာ)သည် ပြဇာတ်တွေမှာ ဟာသသရုပ်ဆောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပါသည်။ မေနွဲ့သည် စုဖရားလတ် (သီပေါမင်း၏ အလွန်သ၀န်တိုသော ဇနီးသည် လည်းဟုတ် ဘုရင်မကြီးလဲဟုတ်) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ (ဒေါ်) ကြည်မာ(စာရေးဆရာမ) သည် စုဖရားလေး (စုဖရားလတ်၏ ညီမတော်) အဖြစ်လည်းကောင်း သရုပ်ဆောင်ကြကာ ကျွန်မအဘုိုးနှင့်အဘွားသည် ဒုိုင်းခင်ခင်၏ မိဘများအဖြစ် အမြဲသရုပ်ဆောင်ကြပါလေသည်။
(ကျွန်မအဘွား (ဒေါ်) ခင်မျိူးချစ်အား စာရေးဆရာပြဇာတ်တစ်ခုတွင် မိဖုရားအဖြစ် တွေ့ရပုံ)
● စာရေးဆရာပြဇာတ်တွေ ဘယ်ရုံမှာပြကြသလဲ?
စာရေးဆရာပြဇာတ်တွေသည် မြန်မာပြည်တွင် အလွန်ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားကြသော ပြဇာတ်တွေ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၀ဇီ၇ာ ရုပ်ရှင်ရုံ မှာ ကပြခဲ့ကြသည်။ သူတုို့၏ စာဖတ်ပရိသတ်များကလည်း သူတုို့အသည်းစွဲ စာရေးဆရာများ ၏သရုပ်ဆောင်မူများကုို တွေ့မြင်ရမှာမို့ အလွန်နှစ်သက်ကြကာ ဦးပုည၏ ကြီးကျယ်ခန်းနားသော ဂန္ဓ၀င်မြောက်စာသားများကုို နားနှင့် ဆတ်ဆတ်ကြားလုိုလှလေသည်။ မြန်မာလူမျိူးတွေဆုိုတာ ဂီတာတုို့ အကတုို့ သီချင်းတုို့နှစ်သက်သူများ မဟုတ်ပါလော။
(မေမေကြီး (ဒေါ်) ခင်မျိူးချစ်ကုို စာရေးဆရာပြဇာတ် ဒုိုင်းခင်ခင်ပြဇာတ်တွင်း တကယ်သရုပ်ဆောင်ဖုို့ ရုိုက်ထားပုံ။)
၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့ ရှားပါးဓါတ်ပုံများကလွဲပြီး ဘာမှတ်တမ်းမှ မကျန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုခေတ်လို ဒစ်၈ျစ်တယ် ဟမ်းဖုန်းခေတ် သာဆုိုပါရင် ထုိုမှတ်တမ်းမှတ်ရာများသည် ယနေ့ခေတ်အတွက်တော့ ဂန္ဓ၀င်မြောက် စာရေးဆရာပြဇာတ် ရွှေခေတ်တစ် ခေတ်ကုို လှစ်ဟပြသ လျက်ရှိနေတော့မည်မှာ သေချာပါသည်။
Posted by Junior Win at 11:15 PM No comments:
စာအုပ်အမည် – My Life Will Go On. ရေးသူ – Junior Win
ဂျူနီယာဝင်း၊ ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၁၄
အ-ထ-က (၁) ရန်ကင်းကျောင်းရှေ့ ဆုိုင်အမှတ် (H) ၁၂လုံးတန်းမှတ်တုိုင်အနီး ရန်ကင်းမြို့နယ်
ဖုံး ၀၉ ၅၁၇ ၉ ၃၉ ၈။ ၀၉ ၇၃၂ ၄၃၈ ၅၁။
ပထမအကြိမ် ၂၀၁၄ ဇွန်လ
တန်ဖိုး- ၁၀၀၀ ကျပ်
မျက်နှာဖုံး ပန်းချီလက်ရာ – ပေါ်ဦးသက်
မျက်နှာဖုံး ဒီဇုိုင်း – ကိုမြင့်စုိုး
နောက်ဖုံးပန်းချီကား – A Girl in the Wood (Vincent Van Gogh)
စာမျက်နှာ – ၇၀
အခန်းပေါင်း – ၁၉ ခန်း
သည်စာအုပ်ကလေးက အမေဇုံကင်ဒဲယ်မှာ တင်ဖြစ်ခဲ့တာ မနှစ်ကပါ။ ၂၀၁၃ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ရက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်မတုိုင်ခင်တုန်းက ကာလတစ်ခုဆီကုို ပြန်သွားချင်တယ်။ အမေဇုံမှာ အင်္ဂလ်ိပ်လုိုစာအုပ်တစ်အုပ်ရေးမယ်လုို့စိတ်ကူးနဲ့ စာစီနေစဉ်မှာ စာအုပ် ဘီဒုိုဟောင်းထဲက အမှိူက်ပုံထဲကလုို့ ဆုိုမလား။ ပြဇာတ်တစ်ပုဒ်ကုို ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ပြဇာတ်နံမယ်က Pride and Prejudice လုို့အမည်ပေးထားတဲ့ ကိုယ်တွေ့ပြဇာတ်ပါ။ အဲသည်ပြဇာတ်က ၁၉ ၉ ၉ ခုနှစ်နောက်ပုိုင်းက လောက်ကလုို့ ထင်တာပဲ။ ဒါမှမဟုတ်လဲ အဲသည်ဝန်းကျင်ပေါ့။ ဘီဘီစီကနေ ပြဇာတ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခု လုပ်တုန်းက ပြိုင်ပွဲဝင် ပြဇာတ်တစ်ခုအနေနဲ့ ၀င်ပြိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပြဇာတ်ဟောင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ စာမျက်နှာ ၂၀ ကျော်လောက်ရှိပြီး ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်တွေထဲက ပညာရေးနယ်ပယ်ထဲကနေ ကြိုးစားခဲ့ရပုံများနဲ့ နောက်ဆုံးနှစ် မဟာသိပံစာမေးပွဲ အထိ ရေးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်လုိုရေး ပြဇာတ်ပါ။
ကျွန်မရဲ့ အတွေးအမြင် ပရိသတ်ကတော့ ကျွန်မရေးခဲ့တဲ့ ဘ၀စာမျက်နှာ တွေ ဖတ်ဖူးထားခဲ့ရင် အဲသည်ပြဇာတ်ထဲ ဘာတွေလဲဆုိုတာ သိကြမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် နောက်ပုိုင်း စာရေးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေ မပါသေးပါဘူး။ အဲဒီဟာကို ပြန်ရှာတွေ့လုိုက်တာဟာ သည်စာအုပ်လေး ဖြစ်လာဖုို့ အစပါပဲ။ ပြဇာတ်ဆုိုတော့ ဒုိုင်ယာလော့တွေနဲ့ ပဲတည်ဆောက်ထားတာပါ။ ဒါကုို စကားပြေပြန်ရေးရတယ်။ ပြီးတော့ စာရေးဆရာ ဖြစ်လာပုံများကုို ထပ်ဖြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကုို ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်ချင်ခဲ့ပေမယ့် ထုတ်ဝေသူတော်တော်များများက ဗမာလုိုပြန်ခုိုင်းတာကြောင့် ကြန့်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ရန်အောင်စာပေက ထုတ်ပေးခဲ့ပါပြီ။ ဘာသာပြန်ဖုို့စိတ်ကူးမရှိပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ အဲသည်ထဲက အခန်းတွေဟာ ကျွန်မရေးနေတဲ့ အတွေးအမြင်ထဲက ရေးခဲ့ပြီး ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ ပညာရေးဆုိုင်ရာဆောင်းပါးတွေ ဘ၀စာမျက်နှာတွေ ဖြစ်နေလုို့ပါပဲ။ ဒီတော့ အခုလုို အင်္ဂလိပ်လုို ထုတ်ဖြစ်ခဲ့တော့ နည်းနည်းပါးပါးတော့ မြန်မာလုိုဆောင်းပါးများထဲက ထည့်မရေးဖြစ်ခဲ့တာတွေတော့ ပါတာပေါ့လေ။ စာအုပ်တစ်အုပ် လုိုရေးရတာဆုိုတော့ အဖွင့်အပိတ် အစအဆုံးရယ်လုို့ ဖြစ်အောင် စီစစ်ရေးသားရတာပေါ့။ သည်အထဲက နိဒါန်းကုို ဘယ်လုိုရေးထားတယ်ဆုိုတာလေး ကို နည်းနည်း ဘာသာပြန်ပေးလုိုက်ပါတယ်…..
ကျွန်မရဲ့ဘ၀မှာ ကျွန်မနဲ့ တခြားသူတွေကြား အရေးကြီးတယ်ဆုိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော့်ကုို မတူညီတဲ့ အမြင်တွေ ရှိနေပါတယ်။ အဲသည်အချက်ဟာ ကျွန်မလျောက်ခဲ့တဲ့ ပညာရေးလမ်းကြောင်းမှာရော ကျွန်မရဲ့ စာပေနယ်ပယ်မှာပါ အရေးပါလှတဲ့ အစိတ်အပိုင်းအနေနဲ့ တည်ရှိနေပါတယ်။
ကျွန်မက ဟောဒါကတော့ဖြင့် အရေးကြီးတယ်လုို့ ယူဆမိပေမယ့် တခြားသူတွေက ဒါကုို အရေးမကြီးဘူးလုို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါကတော့ အလကားဟာတွေ၊ အေ၇းမကြီးပါဘူးလုို့ ကျွန်မက ထင်ပေမယ့် တခြားသူတွေက သိပ်ကုိုအရေးကြီးလှချေရဲ့၊ ဘ၀အတွက် အရေးပါလှချေရဲ့ လုို့ မြင်ကြပြန်ပါရော။ တစ်ယောက်ယောက်ကတော့ အခုလုိုဆုိုချင် ဆုိုနုိုင်ပါတယ် …. အရေးကြီးတယ် အရေးမကြီးဘူးဆုိုတဲ့ အချက်က ဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီး နေလုို့လဲ…..။ အင်း…. အဲဒါပေါ့ အခုကျွန်မ ရေးမှာ….
အဲဒါ ကျွန်မရဲ့ My Life Will Go On စာအုပ်ကလေးရဲ့ အမြည်းဘာသာပြန်ပေး ထားပုံပါပဲ။ ဗမာလုိုဖတ်ချင်သူများ ရှိလာရင် မေးသူများလာရင်တော့လဲ မြန်မာလုိုပြန်ဖုို့ စဉ်းစားရမှာပါ။
အခုတော့ ဘုိုလုိုပဲ ခံစားကြည့်ကြတာပေါ့။
Posted by Junior Win at 10:56 PM No comments:
တေးဆိုငှက်ကလေးနိုက်တင်းဂေး၊ နှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့်လျိူ့ဝှက်သည်းဖိုသိပံ္ပဘာသာပြန်ဝတ္ထုများ (ဘာသာပြန်သူ – ဂျူနီယာဝင်း)
မိုးမခစာအုပ်စင်၊ ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၁၄
ထုတ်ဝေသူ – ဒေါ်စန်းစန်းဝေ
ထုတ်ဝေရာအရပ် – အမှတ် ၄၇၉ – ၄၈၁ မြေညီထပ် (ယာ) မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ဗုိုလ်ဆန်ပက်၊ လမ်း၃၀ကြား ပန်းဘဲတန်း။
မျက်နှာဖုံးပန်းချီ – အံ့ဖွယ်ဇင်
အတွင်းသရုပ်ဖော်လက်ရာ – မောင်ရစ်
အမှာစာ – ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း သင်္ချာ
စီစဉ်သူ – ဦးကြည်နုိုင်
ဖုန်း – ၀၁ ၂၄၅၃၆၈၊ ၀၉ ၈၆၃၃၀၄၄၊ ၀၉ ၄၉၃၄၆၂၁၁။
တန်ဖိုး – ၂၈၀၀ ကျပ်
စာမျက်နှာ – ၂၉ ၉
စာအုပ်ပုံစံ – ဘာသာပြန်ဝတ္ထုများ
ထူးခြားချက် – မူရင်းစာရေးဆရာကြီးများ၏ ဓါတ်ပုံများနှင့်သူတုို့၏ အကြောင်း အကျဉ်းချူပ်များ ပါဝင်ခြင်း။
မူရင်းကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာကြီးများ – အော်စကာဝုိုင်းလ်၊ အက်ဂါအယ်လန်ပိုး၊ ဆာအာသာကုိုနင်ဒွိုင်း၊ ရေးဘရက်ဘာရီ။
မူရင်းဝတ္ထုအမည်များ – Happy Prince, Devoted Friend, Nightingale and the rose, Star Child; The Cask of Amontillado, The Pit and the Pendullum, Morella; The Last Camtomb; Calling Mexico, Fever Dream, Leave Taking, The Coffin, The Murderer, The One Who Waits.
ဘာသာပြန်ခေါင်းစဉ်များ – ပျော်နေတဲ့မင်းသားလေး၊ ချစ်ခင်ရသောမိတ်ဆွေ၊ တေးဆုိုငှက်ကလေးနုိုက်တင်းဂေးနှင့် နှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့်၊ ကြယ်ကလေး။ စပျစ်ဝုိုင် သုို့မဟုတ် အာမွန်တီလာဒုို၊ တွင်းနှင့်ချိန်သီး၊ မောရစ်လာ။ မြေအောက်လှိူင်ခေါင်းအသစ်။ မက္ကစီကုို ခေါ်တယ်၊ အဖျားအိပ်မက်၊ နှူတ်ဆက်ထွက်ခွာ၊ အခေါင်း၊ လူသတ်သမား၊ အင်္ဂါဂြိုလ်မှာစောင့်နေသူ။
မဟေသီ၊ အင်္လကာဝတ်ရည်၊ မြန်မာသစ်၊ ရနံ့သစ်၊ တုို့တွင်ဖော်ပြခဲ့သော ဘာသာပြန်များနှင့် ဘယ်မဂ္ဂဇင်းမှာမှ ဖော်ပြခြင်းမရှိသေးသော The Pit and the Pendulum တွင်းနှင့်ချိန်သီး, နှင့် Morella မော်ရစ်လာ ပါဝင်ပါသည်။ စုစုပေါင်းဘာသာပြန် ၁၄ ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။
ဂျူနီယာဝင်းက သူ့စာအုပ်ကို သည်လိုမြင်ထားပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်ကစလုို့ ဘာသာပြန်ဝတ္ထုများရေးသားဖုို့ စိတ်ပါလာခဲ့ပါသည်။ ဖတ်ရင်းနှင့် အလွန်နှစ်သက်မိသော ၀တ္ထုများ၊ အရေးအသားများ၊ သူတုို့ရေးထားသောအကြောင်းအရာများက ကိုယ်တုိုင်ရေးချင်မိသော စိတ်ကူးအတွေးများ ပါလာတာတွေ ဒါတွေကုိုတေးမှတ်မိထားရတာတွေ များလာရာက ဘာသာပြန်တွေ ရေးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်စီတွင် ဘာသာပြန်ဖြစ်ခဲ့သောအတွေးများကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာကြီးများ၏ ကမ္ဘာကျော်ဝတ္ထုများဟု ကြော်ငြာထားတာကုိုတွေ့တော့ အမွှာညီနောင်စာပေ၏ သည်စာအုပ်လေးအပေါ် ထားရှိသောအမြင်ကုို သိလုိုက်ရတာ ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက် မိပါသည်။
ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တာတွေကုိုသာဖတ်ပြီး ပျော်ရွှင်ရပါသည်။ စာဖတ်တာပျော်ဖို့အတွက် သက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အခြား ဘာရည်ရွယ်ချက်မှ မရှိပါ။ ဖတ်ပြီး ကြိုက်တာတွေကို သာဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မေမေကြီးဒေါ်ခင်မျိူးချစ် ပြောသလုိုဆိုရင်တော့ “သူများစာ ကုိုယ့်စာ လုပ်လုိုက်တာပါပဲ“။ ကြိက်နှစ်သက်၍ ရေးထားသောစာများဖြစ်တာကြောင့် စာဖတ်သူများလည်း ကြိုက်ကြမှာပါပဲ။
Posted by Junior Win at 10:52 PM No comments:
စာအုပ်အမည် – My Life Will Go On. ရေးသူ – Junior W...
တေးဆိုငှက်ကလေးနိုက်တင်းဂေး၊ နှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့်လ...